October 2020 - Khit Minnyo
By KhitMinnyo on October 29, 20202comments:
WiFi Adapter ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ? External WiFi Adapter တွေ ဘာအတွက် လိုအပ်လဲ?
WiFi Adapter ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း တအံ့တသြ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါက WiFi adapter ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဒီမေးခွန်းကို တစ်ယောက်နှစ်ယောက်က မေးခဲ့ရင် ကျွန်တော် အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုက ဒီမေးခွန်းကို လူအများကြီးက မေးကြတာကိုပါ။ 😳😳😳😳😳
Messenger ကနေတစ်မျိုး၊ ဖုန်းဆက်ပြီးတစ်ဖုံ စုံစမ်းကြတဲ့ မေးခွန်းက WiFi Adapter ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်နေရာမှာ သုံးရလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ 😔😔😔😔 တကယ်မသိကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေတာကို လက်မခံချင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစာကို ရေးဖြစ်တာပါ။ ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️ မေးတဲ့ထဲမှာ ကျွန်တော့်ဆီ သင်တန်းတက်နေသူတွေတောင် ပါပါတယ်။ ☺️☺️☺️
WiFi Adapter ဆိုတာလောက်ကိုတော့ လူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ခု ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့သူတိုင်းမှာ ကွန်ပျူတာ ရှိမနေရင်တောင်မှ ဖုန်းတစ်လုံးတော့ ရှိနေမှာပါ။ ပြီးတော့ နေထိုင်ရာဒေသကို လိုက်ပြီး WiFi မသုံးဖူးဘူးဆိုရင်တောင်မှ Zapya နဲ့တော့ ဇာတ်ကားတွေ ကူးဖူးကြမှာပါ။ အဲသည်မှာ Zapya ကူးဖို့အတွက် ဖုန်းတစ်လုံးကနေ WiFi connection ကို ဖန်တီးပေးရပြီး ကျန်တဲ့ဖုန်းက ၀င်ချိတ်ရပါတယ်။ အဲသလိုပဲ WiFi AP တစ်ခုခုကနေ လွှင့်ထားတဲ့ WiFi လိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကနေ ချိတ်သုံးတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့ Settings မှာ ပါရှိတဲ့ WiFi နေရာကနေ သွားပြီး ချိတ်ရပါတယ်။
အဲလို ချိတ်နိုင်တာဟာ ဖုန်းထဲမှာ WiFi adapter ပါနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi Adapter သာ မပါဘူးဆိုရင် အဲလို လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ထို့အတူ Laptop တွေမှာ WiFi adapter ပါတဲ့အတွက် WiFi ချိတ်သုံးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Desktop PC တွေမှာတော့ WiFi adapter ပါ၀င်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ပြင်ပကနေ External Adapter တပ်ပြီး မှ WiFi သုံးလို့ ရပါတယ်။
အရှင်းဆုံး ပြောရရင် WiFi Adapter သည် WiFi လိုင်းတွေကို ဖမ်းယူပေးတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဘာကြောင့် WiFi Adapter လိုအပ်လဲ?
ဖုန်းမှာလည်း WiFi adapter ပါပြီးဖြစ်သလို Laptop တွေမှာလည်း WiFi adapter ပါလာပြီးပါလျက် ဘာကြောင့် WiFi adapter လိုသေးတာလဲဆိုတာ Adapter ဆိုတာ ဘာလဲသိတဲ့သူတွေတောင် စိတ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ အချက် ပါ။
ကျွန်တော်တို့သည် အောက်ပါ အခြေအနေ တစ်ခုခုကြောင့် Adapter လိုအပ်ပါတယ်။
1. Access Point (AP) နှင့် ဝေးကွာသောနေရာများတွင် သုံးလိုသည့်အခါလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေ Laptop တွေထဲမှာ ပါပြီးဖြစ်တဲ့ Adapter တွေသည် အရွယ်အစားအားဖြင့် အတော့်ကို သေးငယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့မှာ အင်တင်နာတိုင်လိုအရာတွေ တပ်ဆင်စရာ နေရာ ရှိမနေပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းက နိမ့်ပါတယ်။
ဥပမာ - ကျွန်တော့်ရဲ့ နံဘေးအိမ် (သို့မဟုတ်) ဆိုင် တစ်ခုခုမှာ WiFi ရှိနေတယ် ဆိုပါစို့။ ဒါကို ကျွန်တော့်အိမ်ကနေ လှမ်းယူသုံးတဲ့ အခါ လိုင်းချိတ်လို့ရပေမယ့် လိုင်း မကောင်းတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေကနေ ကြည့်ရင် WiFi ပုံလေးမှာ တုံးလေးတွေ လျော့နေတာ တွေ့ရမှာပါ။ အဲ တုံးလေးတွေကို Signal လို့ ခေါ်ပါတယ်။
signal တုံးလေးတွေ နည်းလေလေ connection ကို အပြည့်အဝ မရလေလေပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို WiFi သုံးလို့ ရစေဖို့အတွက် လိုင်းတွေကို ထုတ်လွှင့် ပေးတာက Router (AP) တွေပါ။
Router တွေမှာ သူတို့ရဲ့ Transmitting Power ပေါ်မူတည်ပြီး ကောင်းစွာ ထုတ်လွှင့် ပေးနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲသည်အကွာအဝေးထက် ပိုဝေးကွာတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ရောက်နေမယ်ဆိုရင် လိုင်းချိတ်သုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ထို့အတူ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ WiFi card တွေမှာလည်းပဲ သူတို့ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးရှိသလို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းလည်းသတ်မှတ်ချက် ရှိပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptop & Phone တွေမှာပါတဲ့ WiFi card တွေသည် AP လို့ခေါ်တဲ့ WiFi ကို ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ Router နဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ပေမယ့် AP နဲ့ နည်းနည်း လှမ်းသွားတာနဲ့ပဲ လိုင်းကျလာပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အိမ်ရှေ့မှာ router ထားပြီး အိမ်နောက်မှာ ဂိမ်းဆော့မိတဲ့အခါ အဆင်မပြေတာမျိုး ကြုံဖူးရင် သဘောပေါက်လောက်မှာပါ။
Performance ပိုကောင်းကောင်း ရချင်တဲ့အခါ လိုပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WiFi adapter တွေမှာက လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အကန့်အသတ်နဲ့ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါတွေထက် ပိုကောင်းတာ လိုချင်ရင်တော့ ပြင်ပကနေ တပ်သုံးရတဲ့ WiFi Adapter တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က Router (AP) နဲ့ ဝေးနေပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Adapter က အတော်ဝေးဝေးထိ ဖမ်းယူပေးနိုင်တော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
WiFi adapter တစ်ခုထက် ပိုသုံးစရာရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က Virtual Machine တွေသုံးပြီး အဆိုပါ Virtual Machine တွေမှာ WiFi သုံးဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါမျိုး၊ WiFi Hacking လုပ်ဖို့အတွက် airmon-ng နဲ့ Adapter ကို Monitored Mode ပြောင်းထားချိန်မှာ အင်တာနက် သုံးတာကိုလည်း ပြတ်တောက်မသွားချင်တဲ့အခါမျိုး စတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း External WiFi Adapter တစ်ခု လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
WiFi Hacking လုပ်လိုတဲ့အခါ လိုတယ်
ဒါကတော့ ပိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ WiFi hacking လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ Laptop ထဲမှာ ပါလာတဲ့ WiFi adapter တွေထက် ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ Adapter မျိုးတွေရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Adapter ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေဝယ်သင့်လဲ?
အကြံပြုလိုတာကတော့ ALFA Adapter တွေကို သုံးဖို့ပါ။ ALFA တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူဖို့တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ ကံကောင်းတာတစ်ခုက မိတ်ဆွေအနနေနဲ့ ALFA Adapter လိုအပ်တယ်ဆိုရင် မှာယူနိုင်တဲ့ Facebook Page ရှိနေတာပါ။
ဒါကတော့ ALFA AWUS036H ပါ။ RTL8187L Chipset ကို သုံးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ခုလျင် မြန်မာငွေ ၂၀၀၀၀ ကျပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ Long Range ရတယ်။ connection ငြိမ်တယ်။
Windows, Linux & Mac ရတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ Mac OS Catalina မှာတော့ driver အဆင်မပြေပါဘူး။ ထုတ်ခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်လို့ ALFA company ကိုက support မပေးတော့တာပါ။ Linux (အထူးသဖြင့် Kali လို Linux) တွေမှာတော့ တပ်လိုက်တာနဲ့တင် တန်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows မှာတော့ Driver တင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ခွေပါ ပါပါတယ်။ alfa.com.tw မှာလည်း Driver တွေကို Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကတော့ အထက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က လန့်စရာပါ။ 2.4GHz နဲ့ 600Mbps အထိ data transfer လုပ်နိုင်ပြီး 5GHz နဲ့သာဆိုရင် 1300Mbps ထိတောင် Data Transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နံရံတွေ အတားအဆီးတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ signal ကျခြင်းကိုပါ စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ Adapter ပါ။
သူကတော့ ALFA AWUS1900 ပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ခုကို 120000 Ks ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ Adapter နှစ်မျိုးထဲက တစ်ခုခုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Click Here >> To order ALFA Adapters
ဒါတွေအပြင် Wireless Standard တွေနဲ့ WiFi Hacking ကို သေချာလေ့လာလိုပါက ကျွန်တော့်ရဲ့ "Wireless Technlolgies && WiFi Hacking" ဆိုတဲ့ မြန်မာလို WiFi Hacking စာအုပ်နဲ့ လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
စာအုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါ စာအုပ်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါကြောင်းခင်ဗျာ/
လာရောက်လည်ပတ်ဖတ်ရှုသူ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးပါ
By KhitMinnyo on October 17, 2020 No comments: